NGU-ANASTASIA STEFANUK JUNI 3, 2019 UMNYANGO OTHUNYELWEYO, IZITHUBA ZOKUGQIBELA
Amashishini kwihlabathi liphela ahlanganisa ubuchwepheshe ukukhulisa iimveliso kunye neenkonzo kunye nokuhambisana namaxesha. Inkqubo ye-teknoloji entsha elindelekileyo yowama-2020 ixhomekeke ekubandakanyeni ukhetho olwandisiweyo olufana ne-Augmented Reality (AR) kunye ne-Virtual Reality (VR) kumashishini amaninzi, ngakumbi kwiRetail. Ukuba nolwazi ngakumbi malunga nokufunda isicelo seshishini kunye neenkampani zokoqobo ezizenzayo ngokuqinisekileyo ziluncedo.
Kutheni usebenzisa iVR kwishishini?
Kukho inani lezibonelelo zeshishini xa usebenzisa i-VR tech. Ngo-2018, imakethi ye-AR / VR yayixabise malunga neebhiliyoni ezili-12 zeedola, kwaye kuqikelelwa ukuba inyuke ngaphezulu kwe- $ 192 yezigidigidi ngo-2022.
1. Ukuphucula amava abaThengi
I-VR kunye ne-AR ivumela ukuthenga okungakumbi kwaye kugxile ekuthengeni. Izinzwa zabathengi ziyabandakanyeka kwaye ziyakwazi ukuntywila kwaye zijolise kumava okubonakalayo ngaphandle kweziphazamiso zangaphandle. Oku kuvumela abathengi ukuba babe namava emveliso kwindawo ebonakalayo.
2. Izicwangciso zokuthengisa ezingena phakathi kunye nezisebenzayo zokuthengisa
Itekhnoloji ye-VR ivumela amashishini ukuba abe nokuguquguquka okukhulu ekusebenziseni 'ukuzama ngaphambi kokuba uthenge' ingcinga. Nge-VR, ukuthengisa imveliso kujikeleze ukudala amava emveliso yokuqala yezandla zemveliso. I-VR iyakwazi ukuthutha abantu ukuya naphi na, eyokwenene okanye ekucingelwa. Obu buchwephesha butshintsha intengiso ukusuka ekuxeleleni ibali ngemveliso ukuya kubonisa kunye nokuvumela abathengi kunye nabatyali mali ukuba bazazi iimveliso ngokwazo.
3. Ishishini eliPhambili kunye noHlelo lwabaThengi
I-VR ivumela abathengi ukuba bahlole ukuthengiseka, ukusebenza kunye nomgangatho wemveliso. Amashishini ayakwazi ukuqokelela ulwazi oluthe kratya malunga nokuba iimveliso zamkelwe njani ngabathengi. Abarhwebi bahlalutya idatha engqongqo enokusetyenziswa ukuphucula umgangatho wemveliso kunye nokunyusa ukuthembeka kwabathengi.
Inyani yokwenyani inika amathuba okufaka isicelo kumashishini awahlukeneyo. Abarhwebi bayakwazi ukwakha ulangazelelo kunye nomdla ngokubonelela abathengi kunye nabatyalomali ithuba lokufumana iimveliso okanye iinkonzo ezibonelelweyo, ezinjengokuhamba kunye nokulungiswa kwendawo. Ukusetyenziswa kweVR njengenxalenye yeemveliso kunye neenkonzo ezibonelelwa yinkampani kuphucula iyantlukwano yemveliso yenkampani kunye namava abathengi abanawo kwiimveliso zabo.
Iihotele zaseMarriot zisebenzisa iVR ukuvumela iindwendwe zazo ukuba zinamava amasebe awo kwihlabathi liphela. Ngelixa i-Wildlife Trust yase Mzantsi kunye neNtshona Wales ibonelela ngokusetyenziswa kweVR kunye neevidiyo ze-3D zokuntywilisela iindwendwe zazo kumava okutyelela indawo yazo nokonwabela izilwanyana zasendle. I-VR kwezokhenketho ikwangqinele ukuba ingeniso kwiinkampani ezichaphazelekayo. Intsebenziswano phakathi kukaThomas Cooke kunye ne-Samsung Gear VR yayine-40 pesenti ye-ROI kwiinyanga ezintathu zokuqala zokuqaliswa kwayo.
Iinkampani zokuphucula amakhaya ezifana ne-IKEA, uJohn Lewis, kunye noPhuculo lweKhaya laseLowe nazo zisebenzisa i-VR. Itekhnoloji ivumela abathengi babo ukuba babone ngamehlo abo izicwangciso zabo zokuphucula ikhaya kwi-3D. Oku akukhona nje kuphela okuqinisa umbono wabo kumakhaya abo, kodwa bayakwazi ukuphucula kwizicwangciso zabo kwaye badlale ngeendawo zabo ezifanelekileyo besebenzisa iimveliso ezibonelelwe yinkampani.
Iivenkile ezithengisa i-TOMS ezisebenzisa i-VR zivumela abathengi ukuba bahambe ngezicathulo zabo kwaye balandele ukuba imali evela kwintengiso yabo ihamba kanjani kwiminikelo e-Central America. Iinkampani ezizimeleyo ezinjengeVolvo zibonelela abathengi bazo ezinokubakho ithuba lokuvavanya ukuqhuba enye yeemodeli zabo ezintsha ngeVR yabo. AbakwaMcDonald basebenzise ibhokisi yabo eyonwabisayo yesidlo kwaye bayiguqula yaba yindawo yeVR eyonwabisayo enokusetyenziswa ngabathengi ukudlala imidlalo kunye nokuzibandakanya.
Iinkampani ezithengisa izindlu nomhlaba, ezinje ngeGiraffe360 kunye neMatterport, zibonelela ngohambo lwepropathi kubathengi bazo. Iipropathi zesiteyitim ziye zaphakanyiswa kunye ne-VR, kwaye yonyusa arhente kunye nokuzibandakanya kwabaxhasi kunye nomdla. Izicwangciso zokuthengisa kunye nokubekwa kwazo kuye kwaba ngamava asebenzayo kunye nokuntywila kwabathengi kunye neearhente zesicwangciso sobuchule neVR.
Inyani eyandisiweyo lixesha elizayo
Ngokhula okuqhubekayo kophuhliso lwetekhnoloji yeVR kunye nokusetyenziswa, kuqikelelwa ukuba isinye kwisithathu sabathengi behlabathi liphela baya kuba besebenzisa iVR ngonyaka ka-2020. Kwaye nangabantu abaninzi ukufikelela nokusebenzisa itekhnoloji enjalo, amashishini ngokuqinisekileyo aya kulandela ngokubonelela ngeemveliso ezihambelana neVR kunye neenkonzo. Ukubopha itekhnoloji enjalo ukuba ifikeleleke kumashishini kuphucula iimveliso, iinkonzo, iindlela zokuthengisa, kunye nokunyaniseka kwabathengi.